Mahazoarivo, ny 13 martsa 2020 – “Hohamoraina ny fidirana sy ny fivezivezen’ny mponina ao amin’ny tananan’i Fenoarivo, kaominina ambanivohitr’i Begogo, distrikan’Iakora, Faritra Ihorombe, sy ny tananan’Andriry, ao amin’ny distrikan’i Betroka, Faritra Anôsy, ary hojerena manokana ny hitsinjovana ireo tanora voasariky ny asan-dahalo any an-toerana”. Izay no mandravina ny anton-dian’ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, niarahany tamin’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta voakasiky ny resaka fandriampahalemana, dia ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, tany an-toerana.
Anisan’ny tena mbola sarotra ny fidirana ao amin’ny faritr’Andriry, nohon’ny fisian’ny ala mikitroka sy tendrombohitra mampitoka-monina azy, ka nampiroborobo hatramin’izay taona maro izay ny fambolena rongony amina velaran-tany mihoatra ny 20 hekitara, ary nanome vahana ny asan-dahalo sy mitaiza ireo tanora hiafara amin’ny fanaovana malaso. Nomarihin’ny Praiminisitra fa mamatsy rongony ny faritra manodidina azy rehetra, eny hatrany amin’ny renivohitr’i Madagasikara mihintsy, Andriry, saingy tsy mba nisy tompon’andraikitra sahy nijery an’izany hatrizay. Efa eo am-pamotehana an’izany voly tsy ara-dalàna izany ny tafika any an-toerana ankehitriny, ary mijery ny handravàna ny kizo rehetra fieren’ny malaso.
Nambarany fa ao anatin’ny famerenana ny fandriampahalemana dia laharam-pahamehan’ny fitondram-panjakana ankehitriny ny famahana ny toerana rehetra izay anjakan’ny asan-dahalo nohon’ny fitokanany sy ny fahalavirany amin’ny renivohitry ny Faritra sy ny distrika misy azy avy, satria zon’ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka, na aiza na aiza toerana onenany eto Madagasikara, ny misitraka ny fampandrosoana amin’ny alalan’ny fitsinjaram-pahefana tena izy, izay tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika sy ny fampiharana ny politika ankapoben’ny fanjakana. Tsara ny mampahatsiahy fa ny tanjona ao anatin’ny fitsinjaram-pahefana dia ny fanomezana fahafahana mandray fanapahan-kevitra avy hatrany ho an’ireo tompon’andraikitra eny ifotony, amin’ny famahàna haingana ny olana mianjady amin’ny vahoaka. Noho izany dia tsy hijanona any amin’iny faritra iny ny hetsika hatao fa hanenika an’i Madagasikara, ary ao anatin’ny fotoana fohy no hanatanterahana izany.
Mila fepetra hentitra sy haingana ny faritr’Andriry, hoy ny Praiminisitra, manoloana ny fiparitahan’ireo basy, toy ny hita tao fenoarivo, sy ny fahitana tanora mbola milatsaka anaty asan-dahalo ary mampiasa fitaovana amin’izany, toy ny ody gasy, ao koa ireo mpimasy izay manampy azy ireo amin’ny fanaovana asa ratsy. Hatao izany mba mba hiverenan’ireo tanora amin’ny lalana mendrika sy handratovany fianarana indray ary hanasoavany ny fiaraha-monina.
Nohazavain’ny Praiminisitra fa ao anatin’ny fanajàna ny soatoavina Malagasy, dia ny fihavanana, no hifampiresahan’ny fitondram-panjakàna sy hifananarany amin’ny vahoaka, mikasika ny tokony hametrahana ny fiovana sy hialàna amin’ny asa ratsy, ka hijereny ny lafiny fahasalamam-bahoaka, ny fampianarana, ny lalana, sns. Izany anefa, hoy ihany izy, dia ezaka iombonana ary miankina indrindra amin’ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ary ny fitondram-panjakana.
Nitodika manokana tamin’ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana ny Praiminisitra, ary nanantitra ny fankasitrahana ho azy ireo ny amin’ny adidy sy andraikitra noraisin’izy ireo ho an’ny tanindrazana. Notsiahiviny fa adidin’ireo mpitandro ny filaminana hatrany ny miara-miombon’ezaka manohitra ny fomba amam-panao tsy mety miseho amin’ny faritra iasan’izy ireo, ary ny vokatr’izany, hoy izy, dia tsy voatery hiainantsika ankehitriny fa hitsinjovana manokana ny hoavin’ny taranaka Malagasy.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 11 Mars 2020
Iraka natao tany Toamasina →